? မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုပိုင် လုပ်ငန်းများနှင့် စစ်တပ်ပိုင် လုပ်ငန်းတချို့ကို အကြမ်းဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်ကြေညာ၊ စီးပွားရေးပူးတွဲလုပ်သူများကို အရေးယူမည်ဟု NUG ကြေညာ - Voice Of Burma
? မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုပိုင် လုပ်ငန်းများနှင့် စစ်တပ်ပိုင် လုပ်ငန်းတချို့ကို အကြမ်းဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်ကြေညာ၊ စီးပွားရေးပူးတွဲလုပ်သူများကို အရေးယူမည်ဟု NUG ကြေညာ
မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုပိုင် လုပ်ငန်းများနှင့် စစ်တပ်ပိုင် လုပ်ငန်းတချို့ကို အကြမ်းဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်ကြေညာ၊ စီးပွားရေးပူးတွဲလုပ်သူများကို အရေးယူမည်ဟု NUG ကြေညာ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG က မင်းအောင်လှိုင်မိသားစုပိုင် လုပ်ငန်းများနှင့် စစ်တပ်ပိုင် လုပ် ငန်း တချို့ကို အကြမ်းဖက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအ ဖြစ်​ကြေညာလိုက်ပြီး စီးပွားရေးပူးတွဲလုပ်ကိုင်သူများကို အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG အစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တရားဝင် အုပ်ချုပ် နေသည့်အစိုးရထံမှ နိုင်ငံတော် အာဏာသိမ်းယူရန် ကြိုးပမ်းမှုကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူထားသူ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အပေါင်းအပါများမှ စစ်တပ် အပေါ် တွင်ရှိသည့်သြဇာ နှင့် လုပ်ပိုင် ခွင့် ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း၊
ဗိုလ်မင်းအောင် လှိုင်နှင့် စစ်ကောင်စီအမည်ခံ အဖွဲ့ဝင်များသည် နိုင်ငံတော်အာဏာ သိမ်းယူရန် ကြိုးပမ်း ခဲ့ရာမှ နိုင်ငံတော်ပုန်ကုန်မှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြပြီး၊ မတရားမှုအား ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည့် ပြည်သူ လူထုအား နည်းမျိုးစုံ ဖြင့်သတ်ဖြတ်ခြင်း၊
ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်း၊ ပြန်ပေးဆွဲခြင်း၊ ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းဖျက်ဆီးခြင်း၊ ခိုးယူခြင်း၊ ဓားပြတိုက်ခြင်း စသည့် အကြမ်းဖက်စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ဆက်လက် ကျူးလွန် ခဲ့ကြကြောင်း NUG ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင် သည် မလျော်သြဇာဖြင့် စစ်တပ် ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အင်အားကိုအသုံးပြုကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကိုလည်း မိသားစုပိုင် အကျိုး စီးပွား အတွက် လုပ်ဆောင် လျက်ရှိကြောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ စီးပွား ရေး ဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်း ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ စိစစ်တွေ့ရှိရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်သူ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်နှင့် မိသားစု ဝင် အဆက်အနွယ်များ၏အောက်ပါစီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား အကြမ်းဖက်စစ်လုပ်ငန်းများအဖြစ် သတ် မှတ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာအပ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
(က) A & M Mahar Foods and Medical Products ကုမ္ပဏီ
(ခ) Sky One ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ
(ဂ) The Yangon Restaurant၊ Yangon Gallery ပန်းချီပြခန်း
(ဃ) Everfit ကုမ္ပဏီ (ပြည်လမ်း City Mall ဈေးဝယ်စင်တာအပေါ်ထပ်ရှိ GymFitness ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း)
(င) Seventh Sense Company Limited ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီ
(ဆ) စတယ်လာဆဲဗင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် (Stellar Seven Entertainment Company Limited)
(ဇ) Azura Beach Resort ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်း(ချောင်းသာ)
(စျ) အောင်မြင့်မိုရ်မင်း အာမခံကုမ္ပဏီ
(ည) Mytel ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ
(ဋ) ဘုန်းမြတ်ပြည့်စုံ ကုမ္ပဏီလီမိတက် (Bone Myat Pyae Sone Trading Company Limited)
(ဍ) JOOX MYANMAR Music platform
(ဎ) Pullman Hotel (မန္တလေး)
(ဏ) ငြိမ်းချမ်းပြည့်စုံ အဝေးပြေးကားဂိတ် (ရန်ကုန်-ရခိုင်)
(တ) မိုးကောင်းရတနာမိခင်နှင့်ကလေးအထူးကုဆေးရုံ တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
စီးပွားရေးရာဆက်စပ် လုပ်ကိုင် နေသူ များအား ဖော်ထုတ်၍ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေ၊ လုပ် ထုံးလုပ်နည်း များနှင့် အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း NUG စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားသည်။
မင်းအောင်လှိုင်သွားရမည့်နေရာက အာဆီယံမဟုတ်ပဲ အကျည်းထောင်သာဖြစ်တယ်လို့ R2P အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ပြော